‘१३ औं साग नेपालको इतिहासमै भब्य रुपमा सफल हुन्छ, हामी दोस्रो स्थानमा आउँछौं रिजल्ट हेर्न मात्र बाँकी छ’ | Makalukhabar.com
‘१३ औं साग नेपालको इतिहासमै भब्य रुपमा सफल हुन्छ, हामी दोस्रो स्थानमा आउँछौं रिजल्ट हेर्न मात्र बाँकी छ’
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगिताको चटारो छ । यहि मंसिर १५ गतेबाट काठमाडौं, पोखरामा हुने प्रतियोगितालाई भब्य साथ सम्पन्न गर्न उनी दिनरात लागिपरेका छन् ।
प्रतियोगिता आउन ११ दिन मात्र बाँकी रहँदा पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्तीले शंशय पैदा भएपनि सिलवाल भने प्रतियोगिता अहिलेसम्मकै भब्य र सभ्य हुने दावि गर्दछन् । उनी यस पटक नेपालले दोस्रो स्थान हासिल समेत गर्ने दावि गर्छन् । सागको तयारी, र नेपालले प्राप्त गर्ने उपलब्धीका विषयमा सदस्य सचिव सिलवालसँग केशब सापकोटाले गरेको कुराकानीको संक्षेपः
१३ औं साग शुरु हुन ११ दिन मात्र बाँकी छ तयारी कत्तिको भइरहेको छ ?
दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुको खेलकुदको महाकुम्भ ‘साग’को तयारी तिब्र रुपमा भइरहेको छ । मुलतः अधिकांश काम सकिएर तीन वटा काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सातदोवाटोको स्विमिङ पुलको काम ७–८ गते सकिन्छ । रंगशाला निर्माणको काम पनि ९ गतेभित्र सक्ने गरी काम भइरहेको छ । पोखराको रंगशालामा दुबो लगाउने काम सम्पन्न भइसकेको छ । ट्रयाक एण्ड फिल्डको काम सम्पन्न भइसकेको छ । हिजोबाटै प्यारापिट जोड्ने कामपनि भइरहेको छ । ५ दिन भित्र ५५ सय कुर्सी जडान भइसक्छ । बाँकी शुक्रबार कन्टेनरहरु आउँदैछन् । ११–१२ गते भित्र सबै प्यारापिट तयार भइसक्छ ।
दशरथ रंगशाला निर्माणको अन्तिम तयारीमा छ । अबको एक हप्तामा प्यारापिट तयार हुन्छ । १० हजार कुर्सीहरु राखिइसकिएको छ । अन्य ब्यवस्थाकीय तयारी अन्तिम चरणमा छ । खेलाडी दर्ता भइरहेका छन् । २० नोभेम्बर राती १२ बजेपछि अन्तिम नामावली आउँछ ।
पूर्वाधार निर्माणमा हतारहतार काम गर्दा गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठ्दैन, कमसल काम भयो भने पछि समस्या आउला ?
हतारमा गर्दा कमसल हुने फुर्सदमा गर्दा बलियो हुने हैन । रंगशालामा प्रयोग गरिएका कुनैपनि सामान कमसल छैनन् । खाली अहिले भइरहेका कामहरु हाम्रा लागि नयाँ हुन् । त्यसलाई ब्यवस्थित गर्नुपर्ने भएकोले समय लागेको मात्र हो ।
भोली रंगशाला निर्माण गरिसकेपछि निर्माण गरेको संरचना कोल्याप्स नहोस् भन्ने कुरामा पूर्ण सचेत छौं । कुनै घटना दुर्घटना नहोस भनेर म आइकन तीन पटक रेट्रोफिटिङ गरेर अनुगमन समेत गरिसकेको छु । बाहिरबाट हेर्दा समय लागेपनि भविष्यको लागि समेत दृष्टिगत गरेर काम भएको छ ।
१३ औं संस्करणको सागलाई राष्ट्रिय गौरबको प्रतियोगिता भनिएको छ, के मानेमा राष्ट्रिय गौरबको प्रतियोगिता मान्ने ?
सात राष्ट्रहरुको प्रतियोगिता भएकोले यो आफैंमा गौरबको प्रतियोगिता हो । सातै देशका पाँच हजार बढि खेलाडी र यो क्षेत्रमा रहेका २ अर्ब जनसंख्याको प्रतिनिधित्व हुने भएकोले यो प्रतियोगिता धेरैभन्दा धेरै जनसंख्यासँग पुग्नेछ । साग नेपालबाटै शूरु भएकोले यो राष्ट्रको इज्जत प्रतिष्ठासँग पनि जोडिएको छ । प्रतियोगिता भब्यरुपमा सम्पन्न भइसकेपछि विश्वमा नेपाल पनि अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सक्षम छ भनेर पोजेटिभ म्यासेज जान्छ ।
अहिले हामी भिजिट नेपाल २०२० को तयारीमा पनि छौं । प्रतियोगितामा दक्षिण एशियाली राष्ट्रका खेलाडीहरु र खेलप्रेमीहरुको प्रतिनिधित्व हुने भएकोले खेलकुदको माध्यमबाट हाम्रो कला, संस्कृति र इतिहासलाई विश्व सामु पुर्याउन प्रतियोगिताले ठूलो टेवा दिनेमा विस्वस्त छौं । यस मानेमा यो प्रतियोगिता हाम्रो लागि राष्ट्रिय गौरबको प्रतियोगिता हो । सार्क राष्ट्रहरुको एकता, भाइचारा र मित्रतालाई खेलको माध्यमबाट प्रतिष्पर्धा गराउन यसको महत्व छ ।
यस पटक हामीले केहि नयाँ कुरा पस्किने योजना बनाइरहेका छौं । सागकै इतिहासमा पहिलो पटक प्रतियोगिताका सबै इभेन्टहरु १५ वटा इन्टरनेशनल च्यानलबाट प्रत्यक्ष प्रशारण हुँदैछन् । भने, यसपटकको प्रतियोगितामा हाम्रो कला संस्कृति, क्लासिकल र नयाँ हाइटेक प्रविधिलाई फ्युजन गरेका छौं । प्रतियोगितामा करिब डेढ सयदेखि २ सय ड्रोनहरु उडाउने छौं । लेजरलाइटको प्रयोग हुन्छ । इलेक्ट्रिफिकेशन र ब्यूटिफिकेसन फ्युजनमा गइरहेका छौं । यो प्रस्तुतिले नेपाल अन्तराष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सक्षम छ भनेर प्रमाणित पनि हुन्छ ।
तपाईको नियुक्ति नै साग सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर थियो । तर, हामीसँग एउटा पनि सुविधा सम्पन्न रंगशाला नभएकोले चुनौति छैन ?
मेरो नियुक्ति सागकै लागि भन्दापनि समग्र खेलकुदकै विकासको लागि हो । तथापि, बारम्बार सर्दै गएको सागलाई मंसिर १५ मै सम्पन्न गर्नु मेरो लागि ठूलो चुनौति थियो । त्यो चुनौति सामना गर्न सक्छु भनेरै म आएको हुँ । पूर्वाधारका सवालमा तपाईको कुरा ठिक भएपनि हामी आजको भोली गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं ।
अहिले हामीसँग भएका पूर्वाधार यो प्रतियोगिता गर्न सक्षम छ । जति बढि भयो त्यत्ति राम्रो हो । सातै प्रदेश, ७७ वटै जिल्लामा आधुनिक पूर्वाधार बनाउन पाए झन राम्रो । तर, हाम्रो देशको बजेट पनि हेर्नुपर्छ । मेरो चार वर्षे कार्यकालमा कम्तिमा ७ वटै प्रदेशमा अन्तराष्ट्रिय स्तरका पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छु ।
सागका लागि बाहिरबाट आउने खेलाडीको ब्यवस्थापन र स्वागतको लागि कस्तो तयारी भइरहेको छ ?
विदेशबाट आउने खेलाडी अफिसियलहरु हाम्रा पाहुना भएकोले उहाँहरुको स्वागत सत्कारका लागि हामीले विशेष तयारी गरेका छौं । एयरपोर्टमा नेपाली शैलीले स्वागत गर्ने र त्यहाँबाट फास्ट ट्रयाकबाट होटलहरु सम्म पुर्याउने ब्यवस्था गरिसकेका छौं । होटलबाट खेलकुद स्थलसम्मको यातायातको ब्यवस्था गरिसकेका छौं । राजधानीका १ सय वटा होटलहरु बुक भइसकेका छन् । नोभेम्बर २० को राती १२ बजेसम्म खेलाडीहरुको नाम रजिष्ट्रेशन गर्ने समय छ । सबै नामहरु आइसकेपछि कुन–कुन खेलाडी र अफिसियललाई कहाँ राख्ने फाइनल गर्नेछौं । सुरक्षाका लागि करिब २२ हजार सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्नेछौं ।
नेपाली खेलाडीहरुको तयारी कम भयो, विदेश प्रशिक्षणमा गएकाहरुसँग समय कम भयो भन्छन् नी ?
कसरी कम भयो ? १३ वटा गेमको असार अगाडी देखि नै प्रशिक्षण भइरहेको छ । साउनको पहिलो हप्ताबाट सबै खेलको तयारी शुरु भएको छ । ५ महिनाको तयारी भनेको कम हैन । होला यसलाई १ वर्ष बनाउन पाएको भए झनै राम्रो हुन्थ्यो । तर, लामो अवधि प्रशिक्षण गर्दैमा रिजल्ट राम्रो आउँछ भन्न सकिँदैन ।
नेपालमा नेपाली कोचबाट प्रशिक्षण गराइरहेका छौं, विदेशी प्रशिक्षक पनि ल्याएका छौं । संघ र प्रमुख प्रशिक्षकसँग छलफल गरेर आवश्यक खेलाडीलाई विदेशमा पठाएका छौं । विदेशमा प्रतियोगितामा भाग लिएर प्रतियोगिता जितेका उदाहरण पनि छन् । थाइलेण्ड गएको महिला भलिवल टोलीले १५ वटै खेल जितेर स्वर्ण पदक ल्यायो । भारोत्तोलन २ महिनामा २ पटक भयो, पहिलो पटक ३४ रेकर्ड ब्रेक भयो, दोस्रो पटक ४२ रेकर्ड ब्रेक भए । बंगलादेशमा भएको कराते र तेक्वाण्डोमा राम्रो मेडल लिएर आए । यस पटक सागको तयारीमा हामीले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौं ।
यस पटकको सागमा नेपालले कुन पोजिसन ल्याउला ?
यस पटक हाम्रो तयारी, खेलाडीहरुको मेहनतले हामी सागमा दोस्रो स्थानमा आउन सक्छौं ।
प्रथम स्थानमा आउन के चुनौति छ ?
नेपाललाई सागमा पहिलो स्थानमा आइपुग्न धेरै वर्ष लाग्छ । १२ औं सागसम्म भारतले प्रथम स्थान हासिल गर्दैछ । १३ औं सागमा प्रथम हुन्छौं भन्ने हामीलाई छैन । हामी भन्दा भारतको स्तर धेरै माथि छ । कुनै खेलमा हामी भारत भन्दा माथि हौंला तर, समग्र प्रतियोगितामा भारतको स्तर दक्षिण एशियामै राम्रो छ ।
आठौं सागमा नेपालले ल्याएको रिजल्ट भन्दा यस पटकको रिजल्ट कस्तो रहला ?
आठौं सागमा हामीले ३१ वटा स्वर्ण जितेका थियौं । यस पटक न्यूनतम ५० स्वर्ण जित्ने लक्ष्यका साथ अगाडी बढेका छौं ।
नेपालले पदक जित्न सक्ने कुन–कुन खेलहरु छन् ?
विगतमा पनि हामीले मार्सल आर्टबाट बढि पदक जितेका छौं भने, यस पटक पनि मार्सल आर्ट बाटै पदक जित्नेमा आशा गरेका छौं । तेक्वाण्डो, कराँते, उसु, बक्सिङ, भारोत्तोलनमा हामीले आशा गरेका छौं ।
लोकप्रिय भएका खेलहरुमा नेपालको प्रतिष्पर्धा खस्किनुको कारण के हो ?
हाम्रो खेलहरु खस्किएका हैनन्, अन्य राष्ट्रहरुले राम्रो गरेका हुन् भन्छु म । स्विमिङ हाम्रोमा ढिलो सुरु भयो तर, राम्रो नतिजाहरु आएको छ । धेरै रेकर्ड ब्रेक भएका छन् । यदि हामीले धेरै अगाडी शुरु गरेको भए स्विमिङमा आशा गर्न सकिन्थ्यो ।
स्वर्ण पदक ल्याउन नसक्नु एउटा कुरा हो, खस्किएको भन्नु अर्को कुरा हो । नेपालको खेल स्तर खस्किएको छैन । माथि नै उठेको छ । ग्रुप गेममा पनि राम्रो भइरहेको छ । महिला फुटवल, पुरुष फुटवल, भलिवलमा राम्रो भइरहेको छ ।
सागकै मुखमा फुटवल खेलका ४ जना खेलाडीलाई अनुशासनको कारवाही भयो, यसले फुटवल खेलमा असर गर्दैन ?
खेलाडीलाई अनुशासनको कारवाही गर्नु सामान्य हो, यो ठूलो कुरा हैन । नाम चलेका खेलाडीहरुले अनुशासनमा बस्नु नपर्ने हुँदैन, त्यस्ता खेलाडीले त झन अनुशासनमा बस्नुपर्छ । सभामुखलाई छुट दियो र कानुनले ? खेल आफैं अनुशासन हो खेलाडी त अनुशासनमा बस्नै पर्छ ।
अन्तमा, आम जनता र खेलाडीलाई के भन्नु हुन्छ ?
१३ औं साग नेपालको इतिहासमै राम्रो र भब्य रुपमा सफल हुन्छ । यसमा हाम्रो बलबुताले भ्याएसम्म लागि परेका छौं । उद्घाटन, समापन समारोहदेखि प्रतियोगिता गर्नेसम्ममा हाम्रो तयारी तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ । अहिलेको जस्तो तयारी विगतमा भएकै थिएनन् । अब खाली रिजल्ट हेर्न बाँकी छ ।
साग खेलका लागि हामीले मात्र तयारी गरेका छैनौं अन्य ६ राष्ट्रलेपनि उत्तिकै गरेका छन् । कुन देशले कस्तो गरे त्यो रिजल्ट आएपछि मात्र थाहा हुन्छ । प्रतियोगिता भब्य हुन्छ । मंसिर २४ पछिपनि म यहीँ हुन्छु । तपाईहरुले मुल्यांकन गरिदिनुस । राम्रो भए राम्रो भन्नुस नभए सुधार गर्न सल्लाह दिनुस ।
हेलिकोप्टर दुर्घटना हुँदा दुई सैनिकको मृत्यु
मंसिर २५, काठमाडौं । तेस्रोपटक घरेलु मैदानमा आयोजना भएको १३ औँ दक्षिण एशियाली खेलकूद (साग) मा नेपालले ५१ स्वर्ण, ६० रजत तथा ९५ कास्यसहित कूल २०६ पदक जितेको छ । सागको साढे तीन दशकको इतिहासमा यस वर्ष नेपालले कीर्तिमानी प्रदर्शन गर्नुका साथै हालसम्मकै सर्वाधिक स्वर्णपदक जितेको हो । खेलमा सफलता प्राप्त... जारी राख्नुहोस...